रोचक बिचित्र – Page9– JanaSanchar.com
किन बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा कुनै राजाले प्रवेश गर्ने हिम्मत गरेनन्
पोखरा बुढानीलकण्ठ नेपालको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। यो काठमाडौं उपत्यकाको उत्तर तर्फ शिवपुरी डाँडाँको काखमा रहेको छ । यस मन्दिरमा हरिबोधनी अर्थात ठूलो एकादशीको दिन ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ । असार महिनामा पर्ने हरिशयनी एकादशीमा सुतेका भगवान विष्णु भगवान निद्राबाट ब्युँझने र संसार नियाल्ने धार्मिक विस्वासकै कारण यसदिन त्यस ठाँउमा मेला..
चितुवाको बच्चा सिंहले स्याहारेपछि
एक सिंहले अर्को प्रजातिको बच्चा भेटे के गर्ला? तान्जानियामा भने एक सिंहले चितुवाको बच्चा स्याहार गर्दै गरेको दृश्य क्यामरामा कैद भएको छ। यस्तो दृश्य पहिलो पटक देखिएको जनाइएको छ। ‘नोसिक्तोक’ नामक पाँच वर्षको पोथी सिंहले तान्जानियाको ङोरोङोरो संरक्षण क्षेत्रमा यस्तो अनौठो व्यवहार देखाएको हो। सो सिंहलाई नजिकबाट नियालिरहेका..
बाँदरको सेल्फीसम्बन्धी विवाद अमेरिकाको माथिल्लो अदालतमा
एक इण्डोनेसियाली बाँदरको सेल्फीसम्बन्धी विवाद अमेरिकाको माथिल्लो अदालतमा पुगेको छ ।अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोस्थित नाइन्थ सर्किटको पुनरावेदन अदालतले यस विषयमा सुनुवाई गर्दैछ । संघीय न्यायाधीशले गत वर्ष बाँदरलाई कुनै पनि तस्वीरको प्रतिलिपि अधिकार दिन नसकिने फैसला गरेसँगै मुद्दाको वादी पक्षको रुपमा रहेको जनावर अधिकारकर्मी संस्था..
‘मृत्यु भएकी’ महिलाले १ सय २३ दिनपछि जन्माइन् जुम्ल्याहा बच्चा
एक महिला जसलाई डाक्टरहरुले मृत घोषित गरेका थिए उनै महिलाले त्यसको १ सय २३ दिनपछि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माउनु कुनै चमत्कार भन्दा कम होइन । यो घटना दक्षिणी ब्राजिलको हो । जहाँ एक महिलाले मरिसकेपछि पनि जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएर सबैलाई अचम्ममा पारेकी छन् । गत वर्ष ब्रेन डेथ भएकी ती महिलाको गर्भाशयमा रहेका भ्रूण बाँच्न सक्लान् भन्ने आशा..
चीनमा एक पिता छोरीसँग पसे चिहानमा, यस्तो छ दर्दनाक कारण
चीनको सिचुआन प्रान्तमा रहेको नेइजिङमा बस्ने एक दुई वर्षीया बालिकाका पिताले उनलाई चिहानमा गाड्न तयार पारेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेपछि जनताले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। झाङ सिनलेई थालास्सेमिया नामक प्राणघातक रोगबाट पीडित छिन् र उनलाई पितासँगै दिनदिनै चिहानमा राखिने गरिन्छ । मिडियामा आएको रिपोर्टअनुसार पिताले बच्चीलाई..
हाटबजारमा जहाँ बिक्री हुन्छन् बेहुला
भनिन्छ मान्छेको जोडी माथिबाटै बनेर आएको हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ जिवनसाथीको खोजी गर्न अलिक बढि नै मेहेनत गर्नुपर्दछ । कुनै ठाउँमा चाहीँ बेहुलाको किनबेच नै हुँदोरहेछ । छिमेकी देश भारतको बिहारमा बेहुलाको हाटबजार लाग्दछ । सागपात, फलफूल, तरकारी आदिको हाटबजार लागेको त सुनिएकै हो । तर बेहुलाको हाटबजार लागेको कुरा चाहीँ सायद दुनियामै पहिलो..
अफ्रिकामा भेडाले मान्छे जस्तो पाठो जन्मायो
कहिले मानिसले त कहिले जनावरले । विभिन्न असामान्य खालका बच्चाहरु जन्माएका खबर आइरहन्छन् । दक्षिण अफ्रिकामा अहिले यस्तै खालको खबर बाहिर आएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको पूर्वी क्षेत्र लेडी फेरेरेमा एउटा भेंडाले अनौठो पाठो जन्माएको छ । उक्त पाठोको आधा शरीर मानिसको जस्तो छ भने आधा जनावरको । यसरी भेंडाले आधा मान्छे र आधा जनावरजस्तो पाठो..
जनावरलाई दुर्घटनाबाट बचाउन आकाशे पुल (फोटो फिचर)
एजेन्सी, प्राय हामीले देख्ने गरेका छौ हाइवेमा गाडीले किचेर जनवार मृत्यु भएको । यस्तोमा मानिसको पनि एक कर्तब्य हुने गर्दछ की जंगल इलाकामा गाडी चलाउदा जनावरलाई सुरक्षित राखेर गाडी चलाउनु । मानिसलाई बाटो काट्नका लागि आकाशे पुल त तपाइले देख्नु भएकै होला तर जनावरको लागि बाटो काट्न बनाइएको आकाशे पुल पक्कै देख्नु भएको छैन होला । आउनुहोस आज..
प्राचीन समयका ५ चर्चित शहर जो अहिले पानीमा डुवेका छन
प्राचीन समयका केही चर्चित शहर अहिले पानीमा डुबेका छन् । आज हामी ५ शहरका बारेमा जानकारी दिदैछाै । बैज्ञानिकहरुले यी शहरहरुका बारेमा अनुशन्धान गरेर अवषेश पत्ता लगाएका छन् । १‍. क्लियोपेट्रा, अलेक्जेन्ड्रिया, इजिप्ट एलेग्जेन्डर द ग्रेट द्वारा निर्मित याे क्लियोपाट्रा शहर आजभन्दा करीब १६०० बर्ष पहिला जलमग्न भएकाे हाे । याे शहर निकै..
मरुभूमिभित्र हराएको साउदी अरबको एउटा सहर, जुन हाल यस्तो छ (फोटोफिचर)
हजारौं वर्षको अन्तरालमा यस धर्तीका सभ्यताहरु हराउँदै गइरहेका छन् । प्राचीन सभ्यतामा व्यापार प्रयोजनका लागि ठूला–ठूला सहरहरुको निर्माण भएका थिए । तर, ती सहरहरु विस्तारै हराउँदै गए र कालान्तरमा डरलाग्दो खन्डहर बनेर रहे । हाल, साउदी अरबको भूभागमा पर्ने प्राचीन सहर ‘मदैन सलेह’ मरुभूमिमा विलय भएको थियो भन्ने सुन्दा तपाइँलाई अचम्मसमेत..